5 Elihle Iidolophu To Visit On Lake Como | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Elihle Iidolophu To Visit On Lake Como
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 28/08/2021)
Khawube nomfanekiso ehleli phantsi kunandipha ikofu yakho kusasa kwemithana izakhiwo yemveli Italian xa ufuna ukuphuma emanzini ehlwahlwazayo blue kunye neentaba eluhlaza emnandi. Nangona oku kuvakala ngathi nje iphupha, yinto yokwenene kwabo batyelela iLake Como emangalisayo. lo indawo emangalisa lihlala kuluhlu weminqweno lwabahambi ezininzi. nokuba yenze indlela yayo kwi isilivere isikrini Hollywood hits movie angaphandle! Lake Como siyifumana ntshonalanga ye Italy, ilungelo eceleni Swiss Alps. Unxweme lweli isimangaliso sendalo esimangalisayo Zininzi iidolophu eziqinisekileyo ukuba ziyamangalisa. kunjalo, kokuhanjiswa zeziphi utyelelo inokuba umsebenzi kukodwa ukuba ngaba ixakeke ngokumandla. Ukuba elifutshane ngexesha kwaye ufuna ukwenza phantse yakho uhambo, apha zi 5 iidolophu amahle ukuba ndingandwendwela Lake Como.
1. Elihle Iidolophu To Visit On Lake Como: njengoko
Idolophu Tsomo yeyona watyelela zonke iidolophu kule ndawo ngenxa Isikhululo sikaloliwe. Yeyona isiqalo iindwendwe ezininzi ukususela a train ride yeyona ndlela ibhetele elula ukufika Como. Nangona abanye bakugqala yokumisa omfutshane uhambo lwabo lokutyelela nangokubona lonke Como, abanye bayibona njengento yinxalenye amava. Isizathu sokuba iimvakalelo ziyatshintshatshintsha kungenxa dolophu ukuthandwa. Kuyinto phakathi kwiidolophu ezinkulu endhawini, yaye ulamkele ngokupheleleyo ukhanga Pakistan. Abanye abantu abathanda oku kwaye uthabathe ixesha ekufakeni zonke ozibonayo utsalo lwezotyelelo kule dolophu intle. kunjalo, abanye bafuna ukuya kwiidolophu ezincinane ukuba oko ingqalelo iidolophu Italian zingabanjwanga yaye lithembekile.
Nangona ezinye abakhenkethi cinga Como sisibatha kubakhenkethi, bathambekele ekubukhathaleleni ubuhle bokuqala bale nto idolophu yakudala. Unako tirhisa isonto lonke ngokuxilonga Tsomo kwaye afumane izinto ukuba ahloniphe. Inyaniso, abaninzi abakhenkethi ukuba kuwa uthando ne dolophu kuthatha ixesha ukuhamba phakathi komzi. Kukho kunokuba kakhulu cafes zokutyela ejoliswe yokufika abakhenkethi. kunjalo, kukho kwakhona ubuncwane obufihliweyo. Iindawo ezifana silk Museum, i 15Cathedral kwekhulu-th, i Porta Undlunkulu welizwe, kunye nendawo medieval balindele imiphefumlo entsha ngakumbi.
Bellagio i uhambo nje wokuweza, kude Como. Idume ukuba indawo yayo kwaye ubuhle. Lingena ababephezu unxantathu somhlaba ezithiwe lake iziqingatha ezibini. Le dolophu ibekwe phezu kwentaba eweni, nokunikela imbono elinendili abo abahamba i izitrato cobbled kwemicimbi iindawo. bendawo abaninzi abakhenkethi babiza Bellagio jewel isithsaba of Lake Como. Inyaniso, oko yavotelwa njengenye yeedolophu intle eYurophu. Oku ngokungathandabuzekiyo othandwa kakhulu kwaye uninzi batyelela kule ndawo. Xa ufika, uya ukuqonda isizathu sokuba. Ukuba utyelela Bellagio, qiniseka ukuba azise camera nawe. Ukuba kukho indawo aya kukunika umfanekiso ogqibeleleyo, siyafuna Bellagio.
Bergamo Indlela Uqeqesha
Verona ku Como Uqeqesha
3. Elihle Iidolophu To Visit On Lake Como: Varenna
Esikunxweme lwempuma of Lake Como elala Varenna. Nangona kungalindelekanga ukuba ukuthelekisa ubukhulu ukuya kwiidolophu ezinkulu, kusenjalo indawo kumelwe-utyelelo. Le lali yokuloba Italian emveli ubangel umele-uzibonele nabani ofuna ukufumana kude umsindo befuna ukuphila kwisixeko esikhulu. ixesha libonakala ukuma ngxi njengoko bahlale yezikhephe nkebe emanzini eluhlaza ezintabeni wafukama. Emva kokuba uthathe yonke into, kuhamba ukuba imizila cobbled, elihle amabandla, kunye nemizi omangalisayo Varenna. Qiniseka ukuba uphawu Villa Monastero kwi izinto zakho ukuze ubone. Akuyi kusoloko kuvuleleka kuluntu, kodwa ukuba unethamsanqa, Uya kubona izinto ezingaphambili zemveli zase-Italiya kunye neendawo zangaphakathi zekhaya. Thatha uhambe ingenzeka ngezitiya elide ebhityileyo izele flora ezingaqhelekanga xa uvula amehlo echibini.
EMilan ukuya Varenna Uqeqesha
UFlorence Varenna Uqeqesha
ETurin ku Varenna Uqeqesha
Genoa ku Varenna Uqeqesha
Kwi iibhanki yasentshona Lake Como, ungatyelela idolophu esihle Menaggio. Menaggio yidolophu enkulu etsala abaninzi izimvo zayo ezithi izakhiwo elihle. Lo mxube yommandla lwendibanisela ubuhle bendalo kunye idolophu zemveli Italian. Le dolophu has a lot of izakhiwo umhla emva kwenkulungwane ye-19. I-Piazza Garibaldi ngokwesiseko indawo yokuhlanganisana esembindini kumntu wonke balapha kunye nabakhenkethi. Kukho intaphane yeekofu kunye neeresityu ezibonisa ukonwaba kunye nobomi. Menaggio naye kumelwe-utyelelo kubathandi imbali. Le dolophu wadlala indima ebalulekileyo lokuQala Second World Wars. Nowadays, ukhenketho oluninzi lungakusa kwiindawo ezintle ezikufutshane.
Pavia Indlela Uqeqesha
Brescia Indlela Uqeqesha
Bologna Indlela Uqeqesha
Modena ku Como Uqeqesha
5. Elihle Iidolophu To Visit On Lake Como: Tremezzo
Ukuba ufuna ukubona Lake Tsomo kunye nabo bonke ubunewunewu kunye esthetics i ehotele grand, ke utyelele Tremezzo. Tremezzo yidolophu leyo ulamkele ukuthandwa edikeni kwaye sele ligqibe ukuyila amava elikhethekileyo Noluyolo iindwendwe. Nangona yaso yalo kude look emveli angaphezulu nokuthamba, Tremezzo isekhona kwidolophu emangalisayo kutyelelo. Kuyinto kufutshane Bellagio kwaye stop abaninzi ukuba ufuna ukubona indawo ezolileyo ukuba usenalo ezinye buzz kuyo. Nangona hotele kunye nemizi kwidolophu ukuqhuba ezininzi iindwendwe, idolophu usenalo ezinye izinto ezimangalisayo. I-Church of St. Maria, umzekelo, iyathandwa ngenxa nomfanekiso walo okukhulu Madonna nera. Ngaphandle kwaloo nto, nazi igadi ezintle onokuhambahamba kuzo kwaye ukonwabele ukubonwa kunye nezandi zeLake Como.
Tortona Indlela Uqeqesha
Mantua Indlela Uqeqesha
Piacenza ku Como Uqeqesha
Livorno ku Como Uqeqesha
Ezi nje 5 iidolophu amahle ukuba ndingandwendwela Lake Como. kunjalo, i chibi okuninzi ukuba banikele ngaphezu ubuhle amileyo needolophu ezintle. Visit Lake Como kwaye onwabele imisebenzi amanzi fun, kwelanga ezimangalisayo, kunye nokuhamba ngeenyawo umdla. Incwadi A Ukuqeqesha uze uphonononge Lake Como, nezimanga, zilurhangqile kubonise.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Elihle Iidolophu To Visit On Lake Como” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fpicturesque-towns-lake-como%2F%3Flang%3Dxh – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#LakeComo comolake europetravel eurotrip italytravel tips uloliwe train Travel travelitaly
Travel Europe, Iindawo ezinika umdla Tips
10 Tips Indlela To Ququzelela Hand Impahla yakho